Kudzokorora kwechirongwa ichifadza, asi kwete nyore uye kunonetsa. Kuti zvinomera zvifadze ziso, inofanira kugara ichichengetwa, kwete kungodiridza chete, kudyarwa, kudyarwa, asi zvakare kukwidzwa. Kunyanya it swings perennial plants, shrubs, hedges. Nekugunzva, vamwe vanoshandisa zviyero zvekicheni. Asi kana uri kuronga kunyatsopindira mune zvekugadzirwa kwenyika, iwe uchafanirwa kuenda kune imwe uye kutenga midziyo yakakosha, kunyanya, uye munda wemizambiringa.
Munda wegindu ndivo vakasiyana-siyana uye vanonzwisisa mienzaniso yavo uye mhando dzevavhisi haisi nyore. Kuti tibatsire basa racho, ngatiyeukei kuti munda webindu rinonziwo secateurs. Izvo zvakagadziriswa uye kuonekwa kwezvisikwa zvinoenderana nechinangwa chavo. Funga nezvemhando mikuru yebindu iri rakashandurwa.
Pakati pemunda webindu, wakagadzirirwa kuumba mabhiza nemiti, pamwe nekuchera mabheji, kusiyanisa:
munda wehairi. Izvi zvinosanganisira zviyero pachavo, pamwe chete nemhando dzose dzezvigadziriswa nevashambadzi - michero yebindu pamushonga wakareba. Bindu jasi remaoko rinoshandiswa pakucheka nekuchera zviduku zvitsva uye shrub. Kunze kwavanoita sezvipembenene zvakajairika, izvo zvataishandisa kushandisa pamapepa kana micheka, asi, zvechokwadi, nemusiyano iwoyo mavara acho akawandisa uye akaoma. Vanotapura matavi nyore nyore, majaya mashoma, mashizha uye kunyange nheyo. Nekucheka kwemasingano, kunongedza nemasikisi uye zvinyorwa zvinoshandiswa, izvo zvinobvumira kubata nenyuchi uye kwete kurega zvichinyangarika;
magetsi magetsi mashizha achaita basa guru. Inonyanya kuve nyore yekucheka nekucheka mazhenje nemimwe minda mikuru yemashirwi. Inoshandiswa kushandiswa uye kugadziriswa munda wemashizha - iyo yemagetsi, asi nesimba rine simba. Bhatiri inoita kuti chigadzirwa ichi chiwedzerese uye chinotendera kuti chirege kuvimba pamutambo, asi pamwe nayo iyo inopisa inorema ne1-1.5 kg;
munda wegasi peteroli - maererano nemitemo yebasa yakafanana neyemagetsi, inongowedzera simba uye ine simba.
Gorosi inoita uswa
Ichokwadi kuti uswa mubindu hunogona kutemwa uswa hwakasvibira. Zvisinei, vane ruzivo vanoziva kuti kuti vabudirire chibereko chakanakisisa - kuti mhanje yakatarisa mumitambo yakanakisisa yemapurisa kubva kumafirimu emuAmerica, saka hazvigoneki. Kuti upedze chifananidzo, unoda kushanda nemumwe mudziyo - zvikasi zveuswa.
Pfungwa yebasa inosiyanisa:
bindu re shears manotsi (magetsi) yehusi - inowanzoita, tsika, iyo yakasvinudzwa uye yakavharwa nekubatsirwa kwemashu, uyewo shanduko - mazamu ayo anogona kushandurwa zvachose kubva pamakona ose, kusvika ku 360⁰;
bhatiri uswa hunopisa - huzere neine simba roga roga roga. Zvechokwadi zviri nyore kwazvo, nokuti hapana chikonzero chekuchera uswa. Mukuwedzera, ivo vanobudirira kwazvo, vane hukuru hwepamusoro-soro uye vanobvumira kutema kunyange sharu, uswa hwakaoma.
Kana shanje iri nzvimbo shoma, unogona kuita pasina mhando yemagetsi, iyo isingadhuri kupfuura "mushandi" wegetsi, asi vashandi vanosimbisa kuti zvinodikanwa kushandisa zvose zviri zviviri, zvichienderana nemhosva. Mhando mbiri idzi dzinoita kuti zvikwanise kudonha uswa zvose zviri kumusoro uye pane imwe nzvimbo. Izvi zvinokubvumira kudonha uswa hwakapoteredza mbiru uye pamwe nemasvingo uye hedges, kuswedera pedyo navo.
Motokari pombi yekudiridza munda
Nguva yekuunganidza mbeu yeiii?
Nymphaea - kudyara uye kutarisira
Kurwisana nemapapiro machena emishonga yevanhu
Ndezvipi zvakasiyana-siyana zvinokonzera tomato?
Verbena - kukura kubva kumbeu, kana yakasimwa pamichero, zvinhu zvekutarisira
Mashizha matsvuku pamapuroti - zvikonzero
Asparagus - kukura panze, mazano anobatsira okudyara
"Horus" - mirayiridzo yekushandisa mazambiringa
Mazambiringa a Anyuta
Kiparisovik - kudyara uye kutarisira
Zuva rye rinonzi siderat
Tomato "Pink Elephant"
Zvisimbiso muzvinyoro zvinyoro munguva yekudyisa
Bromocriptine yekuguma kweactation
Runes to attract attract money
Autumn makeup collection Guerlain 2016
Nyore saladhi ne shrimps
Kuwedzera kweprolactin kuvakadzi
Pota sofa mubhedha
Nzira yekubika sei nyama yegomba lagman?
Antstrusy mu aquarium - kubereka
Michelle Rodriguez akabvuma kuti kufa kwaPauro Walker kwakachinja upenyu hwake
Kusina dare mumuviri
Nzira yekusunungura misoro yemvere?
Kanzashi - chishongo chemvere
Chii chokubika kubva kuna tomate kuzodya?
13 nheyo dzichava nemigumisiro yakanaka kwauri munguva yemberi
Melania Trump akataurira pepanhau rinonzi Daily Mail nezvezvimhosva zveupfambi